राप्रपा एकीकरण : जनतालाई हर्ष न विस्मात ! – Chitwan Post
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरु पुनः एकीकृत भए । उनीहरुले श्रीमद्भगवद्गीता छोएर कसम पनि खाए र भने– ‘अब हामी फुट्दैनौँ र फुट्न पनि दिन्नौँ ।’ उनीहरुले पहिले पनि भन्न त यसै भनेका थिए । तर एउटा फरक त्यो हो, श्रीमद्भगवद्गीता छोएर कसम खाएका चाहिँ थिएनन् । यसपटक भने पूर्वीय दर्शनका सर्वाधिक सम्मान गर्ने गरेको श्रीमद्भगवद्गीता छोए र यसलाई साक्षी राखेर अब एक भएको उद्घोष गरे । खासगरी, कमल थापाले गोजीबाट गीताको सानो गुटिका निकालेर यसलाई देखाउँदै अब नफुट्ने विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले गीता नै समाएर कसम खानुपर्ने स्थिति किन आयो ? यो स्थिति सृजना कसरी भयो ? कुन कुन क्षेत्रमा छ यस्तो ? जनतालाई विश्वासमा लिन गीताजस्ता पवित्र ग्रन्थ समाएरै कसम खानुपर्ने अवस्था कहाँबाट पैदा भयो ? यस्ता अनेकौँ यक्षप्रश्न तेर्सिन्छन् राजनीतिक चरित्रमाथि । हुन त, एक अध्ययनलाई हेर्दा राजनीतिक चरित्रमाथि मात्र नभई अरु अनेकौँ चरित्रहरुमाथि पनि कैयौँ शंका र उपशंका उब्जन्छन् । थोरै साह्र्रै थोरै र त्यसको सापेक्षतामा अधिक र अत्यधिक विश्वसनीय पात्र र चरित्रहरु पनि देखिएका छन् समाजमा ।
त्यस अध्ययनले कुन कुन पेसाकर्मीमाथि जनताको कति कति प्रतिशत विश्वास छ र तिनमाथि कति कति प्रतिशत विश्वास डग्मगाएको छ ? सर्वाधिक अविश्वसनीयदेखि कम विश्वसनीय र अधिक विश्वसनीय यो तथ्य प्रकाशमा आएको छ । यद्यपि, यसको पनि विश्वसनीयता र वैधता कति प्रतिशत छ यसै भन्न नसकिएला, तथापि पक्कै यसले केही विश्वसनीयताको झल्को प्रस्तुत गरेको छ । त्यसो त, यो सापेक्षताको हिसाब हो । आजका मितिमा शायद त्यस्तो कोही देखिन्न शतप्रतिशत विश्वास गर्नयोग्य । बाबु नै बलात्कार गर्नमा र बेचबिखन गर्नमा उद्यत देखा पर्छन् । यदाकदा छोराछोरीको हत्या गर्नमै पनि अग्रणी यिनै भेटिन्छन् । छोरो नै पनि विभिन्न निहुँमा बाबुआमा मार्न र वृद्धा आमामाथि यौनतृष्णा मेट्न उद्यत रहेको खबर छापिन्छन् । यसका सापेक्षमा अरु त्यसै पनि कम विश्वसनीय देखिँदै आएका छन् । तथापि, अपवादमा हुने यस्ता पाशविक र नृशंस कर्मलाई साधारणीकरण गर्नु अनुचित हुन्छ । यदाकदा हुने यस्ता कर्मले मानव सभ्यतालाई नै कलंकित तुल्याउने गरे पनि आमरुपमा समाज र सभ्यता त्यतातर्फ उन्मुख रहेको मान्न सकिन्न ।
जहाँसम्म वर्तमान नेपालमा आमरुपमा राजनीतिक चरित्र र तिनमा देखिने प्रवृत्तिहरु छन्, तीमध्ये सृजनशील, आदर्शशील, सेवा, समर्पण र राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएका बिरलाकोटिमै छन् । जो जति छन् ती अझै ओझेलमा छन् र तिनलाई ओझेलमा पारिने क्रम यथावत् छ । त्यस्ता व्यक्ति र चरित्र भनेका नेपालका निम्ति अपवाद हुन् । आमरुपमा भेटिने भनेका ज्यादा स्वार्थान्धताले भरिएकै भेटिन्छन् ।
चुनावमा वाचा गर्छन् । मातृभूमिको कसम खान्छन् । पार्टीको कसम खान्छन् । जनताको कसम खान्छन् । शहीद र ईश्वरका नाउँमा कसम खान्छन् । तर, निर्वाचित हुनेबित्तिकै सबै भुल्छन् । कसम खाएका प्रतिबद्धतापत्र रद्दीका टोकरीमा फाल्ने र पुरानै तालमा नाच्ने प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिइरहेपछि जनविश्वास गुमाएका हुन् नेताले । जनआन्दोलन र निर्वाचनहरुमा युवापुस्ताको उपयोग गर्न उनीहरुलाई जागिरको झुटो प्रलोभन देखाउने र आश्वासन दिने, जनतालाई विकासे सपना बाँड्ने तर जितेर गएपछि पाँच वर्षसम्म फर्केरै नआउने, सुखदुःखमा साथ नदिने, अप्राकृतिकरुपमा सरकार बनाउन र गिराउनमा क्रियाशील हुने, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार र दमनमा उत्रिने, जसले जिताएर पठायो उसैमाथि धोका दिने, रातो पासपोर्टदेखि मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा समेत संलग्न रहने, सीमा मिचिँदा र विदेशी प्रहरी एवं सेनाको हस्तक्षेपलाई मौनस्वीकृति दिने, विदेशी राजदूतलाई भेट्न आफैँ जाने, कूटनीतिक मर्म र मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नेजस्ता कैयौँ अकर्मण्य कर्मका कारण राजनीतिक नेतृत्व अविश्वस्तमात्र रहने प्रदूषित पनि बन्न पुग्यो ।
केही पार्टी सैद्धान्तिक विचलनको गम्भीर आरोप लगाउँदै विभिन्न टुक्रामा विभक्त भए । केही स्वार्थ मिले पार्टी एकीकृत गरिहाल्ने र नमिल्नेबित्तिकै पार्टी फोर्न उद्यत भइहाल्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरह्यो । फलतः कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न घटकहरुमा विभाजित भए । खासगरी, एउटै मधेसवादी दल पनि सात–आठ टुक्रामा विभक्त भयो । यस्तै, नेपाली कांग्रेस पनि स्वार्थ नमिलेरै विभिन्न पार्टीमा विभाजित भएको तीतो र दुःखलाग्दो इतिहास हामीसमक्ष छ । त्यसका मह¤वपूर्ण दुई घटकको मिलन भए पनि अझै धेरै पार्टीहरु आप्mनै तालमा हिँडिरहेको स्थिति छ । त्यसो त, जुन अहिले राप्रपाको मिलन भएको छ त्यही पार्टी पनि स्वार्थ नमिलेरै विभिन्न पार्टीमा विभाजित भएको हो । एकीकरण गरी हस्ताक्षर भएको मसी पनि राम्ररी सुक्न नपाउँदै पुनः विभिन्न पार्टीमै परिणत हुनपुगेको थियो । तिनै पार्टीहरु अहिले पुनः श्रीमद्भगवद्गीताको कसम खाँदै पुनः एकीकृत भएका छन् ।
भित्री मन–मस्तिष्क र हृदयबाट नै सदाका निम्ति संगठित भएको हो भने यो एकीकरण सुखद र देशका लागि पनि हितकर छ । यसलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ । तर नेतृत्वका कार्यशैली, स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति, व्यवहार र चिन्तनका कारण यो मिलन पानीको फोकाझैँ क्षणभरका लागि हुने, बाहिर देख्दा एक भएजस्तो भए पनि वस्तुतः त्यो भित्रभित्रै धमिराले खाएको सालको रुखजस्तै देखिने, जोगीको कतिवटा टालो हालेको हो त्यति नै रङ र झोलाजस्ता गुटहरु कैयौँ वर्षसम्म पनि अलग्गै देखिने र बार्गेनिङ गरिराख्ने, पार्टीको निर्णयमा, सत्ता समीकरण र ध्रुवीकरणमा पनि त्यसको स्पष्ट छाप देखिरहने र त्यही नै निर्णायक बन्ने स्थिति हो भने यो मिलन ननिल्नु नओकल्नु हुनेछ ।
विभिन्न पार्टीहरु एकीकृत भई बनेको पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी सरकार चलाउन पाएमा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री पठाउन कठिनमात्रै नभई एउटै पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरुको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीमा नभई विभिन्न गुटका नेताहरुमा हुने भएकाले सरकारले राम्रो काम गर्न सक्दैन र विकलांगझैँ बन्न पुग्दछ । विभिन्न गुटको सिफारिसमा बनेका मन्त्रीहरुका बीच अन्तर्मन्त्रालयगत समन्वय र सन्तुलन हुन नसक्दा सरकारले गर्ने काममा प्रभावकारिता प्राप्त हुन फलामको चिउरा चपाएसरह हुन्छ । त्यही नियति भोगिरहेछ वर्तमान सरकारले । काम प्रभावकारी हुन नसक्दा त्यसको असर भोगिरहेछ देशले र जनताले पनि । फलतः दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको सरकार त्यति उत्पादक बन्न नसकिरहेको परिस्थितिलाई हेर्दा यो एकीकरण पनि जनताका निम्ति न हर्ष न विस्मातजस्तो देखिन्छ ।
अर्को कुरा, त्यसो त बहुअध्यक्षीय प्रणालीमा हिँडिरहेको राजपा र नेकपाले पनि कुनै करिश्मा देखाउन सकिरहेको जस्तो लाग्दैन । मन नमिलेर र कुरा नमिलेर कैयौँपटक पार्टी अध्यक्षहरुकै बीच अन्तरसंवाद हुन नसकेको अनुभव हामीसँग छ । सँगसँगै अध्यक्षता गर्ने कुरामा समेत पालो नसर्दा एउटा अध्यक्षले मात्र अध्यक्षता गरिरहँदा पैदा भएको उकुसमुकुस र सकस बेलाबखतमा सतहमा आएर सडकमा पोखिएका थुप्रै घटनाहरु छन् ।
खासगरी, एकीकृत भइसक्दा पनि एकले अर्कोलाई कमजोर बनाएर आपूm शक्तिशाली बन्ने भगीरथ प्रयत्न जारी राख्दा ती पार्टीहरु बाहिर एक भएजस्तो देखिए पनि एउटा सौर्यमण्डलभित्रका ग्रह र उपग्रहहरुझैँ भित्रभित्र गुट र उपगुटका झुन्ड बोकेर हिँडिरहेका प्रतीत हुन्छन् । यसैले, ती पार्टीले न समयमा एकता प्रणालीलाई टुङ्ग्याउन सकिरहेका छन्, न त महाधिवेशन गर्ने मनस्थितिमा छन् । बरू, एउटा दुइटा शक्तिलाई कमजोर बनाएर बल्ल त्यतातिर जाने सोच हरेक अध्यक्षमा पलाइरहेको देखिन्छ । त्यही सोचकै कारण राजपा एकपार्टी भइसकेको वर्षौं बितिसक्दा पनि अझै अधिवेशन गर्न नसकेर अररिएर बसेको छ । नेकपा कार्यकारी अध्यक्षता पाएर पनि कामै गर्न नसकेर झोक्राएर बसेको स्थितिमा छ । कांग्रेसका कैयौँ गुट मुख्यतः त्रिगुटमा समेटिए पनि सभापतिको कार्यशैलीगत प्रवृत्तिका कारण कलहको चक्रव्यूहबाट उक्सन सकिरहेको छैन । पार्टी एक हुनु स्वार्थमै र फुट्नु पनि स्वार्थमै हुने हुँदा विश्वास गरिरहने वातावरण नभएकाले जनताका निम्ति यस्ता एकीकरण कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातजस्तै बन्न गएको छ ।
हो, जति थोरै पार्टी हुन्छन् उति नै द्वन्द्व पनि कम हुन्छ र विकास निर्माणमा पनि ध्यान एकीकृत गर्न सहज हुन्छ । विकसित देशहरुमा पनि थोरै पार्टी हुने देखिएको छ । यसैले, त्यहाँ विकास निर्माण पनि उन्नत गतिमा पुगेको छ । यसैले, हामीकहाँ पनि धेरै पार्टीभन्दा थोरै पार्टी होऊन् । सबै दलहरु देश र जनताप्रति जवाफदेही बनून् र एउटा निश्चित नियम र दर्शनअनुरुप चलून् भन्ने चाहन्छन् । ती द्वन्द्वरत नरहून् । विकास र निर्माणमा अग्रसर बनून् भन्ने चाहन्छन् ।
हुन त, राजनीतिक संक्रमण अझै नटुंगिएकाले पनि यस्ता समस्याहरु देखिएका होलान् । तथापि, पार्टी एक हुँदा देश र जनताले पनि त्यसको न्यूनतम लाभको प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्छ । त्यसो भयो भनेमात्रै जनताले एकीकृत हुँदा अब उनीहरु विविध कारणले फुट्ने छैनन् । देश र जनताका लागि काम गर्नेछन् भनेर विश्वास गर्नेछन् । तबमात्र राजनीति र राजनीतिज्ञलाई विश्वास गर्नेछन् र उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिमा पनि सुधार हुनेछ भन्ने आशा गरौँ ।
बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य
संकटको समयमा चलखेल ?
विश्वलाई घेराबन्दी गर्ने ‘ज्यानमारा’ भाइरस
केही आफ्नै कुरा